ယခုတစ်လောမှ ခရီးသွားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေက ရက်ဆက်ဖန်လာသည်။ အနုပညာရှင်များ၏ အလုပ် သည်အများပြည်သူလိုပိတ်ရက်မရှိ၊ နားရက်ဆိုသည်မှာလည်း ပုံသေမဟုတ်။ လွန်ခဲ့တဲ့(၂)ရက်ကမှ ကျောက်ဆည်ရိုက်ကူးရေးမှပြန်ရောက်လာသောကျွန်မယခုတစ်ဖန်လည်းတောင်ကြီး၊အင်းလေးသို့ရိုက်ကူးရေးခရီး အဖြစ်သွားရပေဦးမည်။ အနုပညာလုပ်ငန်းသည် အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါရှိတုန်းကြိုးစားမှ အောင်မြင်သော အလုပ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ သို့မဟုတ်ပါက မိမိကမိုးပျံအောင်တော်နေလည်း အသုံးချဖို့အခွင့်အရေးမရပါက ကိုယ့်အနုပညာကို ပရိသတ်ကမြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်။
ကျွန်မတို့လောကတွင် ကြိုးစားပါလျှက်နှင့်မအောင်မြင်သူအများစုမှာ မိမိတတ်ထားသည့် ပညာရပ်ကို အသုံးချ ပြခွင့်ဟူသော အခွင့်အရေးမရကြ၍သာဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ကံတရားက ကျွန်မကို အခွင့်အရေးမရကြ၍သာ ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ကံတရားက ကျွန်မကို အခွင့်အရေးပေးလာပြီဖြစ်သောကြောင့် စက်တင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့ တွင် တောင်ကြီးမြို့သို့ “တောင်ပေါ်သား” EXPRESS နေ့လည် (၁၂း၃၀)ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာ လာခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်အေးချမ်းလှသော သစ်ရိပ်များနှင့်စိမ်းစိုနေသော လယ်ကွင်းများကို ဖြတ်သန်းလာ ခဲ့ရသဖြင့်မြို့ပြပုံရိပ်နှင့်ဆန့်ကျင်လှသောမြင်ကွင်းများကြောင့် မျက်စိပသာဒဖြစ်စရာကောင်းလှပေသည်။
ပဲခူးမြို့မှ ဒိုက်ဦးခရီးစဉ်တစ်လျှောက် တောင်တောင်အီအီလျှောက်ကြည့်ရင်းခရီးဆက်လာခဲ့ရာ ပြွန်တန်ဆာ မြို့သို့ အဝင်တွင်မှေးခနဲတစ်ချက်အိပ်ပျော်သွားရာ၊ ကားစက်သတ်သံကြောင့် လန့်နိုးသွားရသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့အကဲခတ်လိုက်မိသည်။ ကားပျက်သဖြင့် ပြွန်တန်ဆာဘူတာအကျော်မှာပင် လုံးဝထိုးရပ်သွားတော့သည်။ အချိန်ကား ညနေ (၅း၃၀)ထိုးနေသဖြင့် ကားဆရာများလည်း တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက်ပြင်ကြရာ၊ နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် လက်လျှော့လိုက်ရသည့် အခြေအနေ သို့ ရောက်သွားလေသည်။
ဟိုက် အဲဒါမှ ပြဿနာ၏အစပင်။ အခုပဲခရီးစထွက်တာ (၅းဝ၀)နီးပါးပင်ရှိသွားပြီ။ ရှေ့ဆက်သွားမရတော့ ဘူးဆိုလျှင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟု ဝိုင်းစဉ်းစားကြစဉ် အဆုံးသတ်အဖြေက ကားတစ်စင်းထပ်ချိန်း ပေးရန်သာ ရှိတော့သည်။ စဉ်းစားလေ၊ စိတ်ရှုပ်လေပင်။
ဟုတ်ပါပြီ၊ ကားချင်းချိန်းတယ်ပဲထားဦး၊ ရန်ကုန်ရှိ အောင်မင်္ဂလာကားဂိတ်မှ ကားအသစ်တစ်စီးထွက်လာ၍ ပြွန်တန်ဆာမြို့သို့ရောက်ချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန်မှာ နောက်ထပ်အနည်းဆုံးငါးနာရီခန့် ပင်ကြာနိုင်မည်။ ထိုအချိန်နှောင့်နှေးမှုကြောင့် တောင်ကြီးမြို့တွင် ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်များ ပြောင်းလဲတော့ပေမည်။ ကဲ နောက်ကိစ္စ နောက်ရှင်း။ လောလောဆယ်အနေအထားအရ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် အမှောင်ထုကကြီးစိုးလာ သလို ဝမ်းဟာမှုကလည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ မြို့ခံလူများကို မေးမြန်း၍ ဝမ်းဖြည့်နိုင်မည့်ဆိုင်သို့ ခရီးသွားများ အားလုံး မတိုင်ပင်ဘဲခြေဦး လှည့်ဖြစ်ကြသည်။ မိုးအေးအေးတွင် အတန်ငယ်လျှောက်လာပြီးမြို့ထဲသို့အရောက် “ရွှေမြန်မာ”အမည်ရှိ ထမင်းဆိုင်ငယ်လေးတစ်ဆိုင်တွေ့၍ အပြေးအလွှားဝင်လိုက်ကြသည်။
ခရီးသွားများပြားခြင်း၊ဆိုင်သိမ်းချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထမင်းကုန်ပြီဟူသောအသံကြားလိုက်ချိန်တွင် စိတ်အတော် လေးညစ်သွားခဲ့ရသည်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကံမကောင်းခြင်းဟုတွေးမိရင်း နောက်တစ်ဆိုင်သို့ လမ်းထပ်ညွှန် ပြသဖြင့် ထမင်းဆိုင်ဟုခေါ်သော ခုံတန်းရှည်ကြီးနှစ်ခုံဆက်၍ အမိုးထိုးကာ၊ ဗွက်တောထဲတွင် ရောင်းနေသော ထမင်းနှင့်ဟင်းကို ခေါင်းမဖော်တမ်းစားနေမိတော့သည်။ အရေးထဲအနီးနားတွင် မွေးမြူထားသော ဝက်ခြံမှ ဝက်ပေါက်ကလေးနှစ်ကောင်ကလည်း ကျွန်မခြေထောက်ကို နှုတ်သီးဖြင့် ထိုးကာလာဆော့နေသေးသည်။ ထမင်းငတ်သည့် ဒဏ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် ယခုတစ်ခါငတ်သော ထမင်းကပိုစား၍ မြိန်သည်။ ထမင်းနှင့်သီးစုံချဉ်ဟင်း၊ ရန်ကုန်တွင် မကြိုက်၍ တစ်ခါမှ မစားခဲ့သော ပဲပင်ပေါက်ချဉ်ဖတ်ဟင်း၊ ငါးကြော်တို့မှာ နတ်သုဒ္ဓါတစ်မျိုးအလားတင်စားရပေမည်။
ကားပေါ်တွင် ခင်မင်၍အတူပါလာသော အန်တီမော်ဆိုသူကမူ စားမဝင်သဖြင့် ကြိတ်မှိတ်၍ မြိုချရသည်ဟု တတွတ်တွတ်ပြောနေချိန်တွင် ထမင်းတစ်မောက်ကြီးထည့်ထားသော ကျွန်မပန်းကန်မှာပြောင်လေပြီ။ သန့်တာ မသန့်တာအပထား၊ ဗိုက်ပြည့်ဖို့ကဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးပင်၊ ကိစ္စတစ်ခုပြတ်ပြီမို့ တောင်ကြီးမြို့သို့ ရောက် နှင့်နေပြီဖြစ်သော မြဝတီမှာ အဘတင်သန်းဦးနှင့် ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်တို့ထံသို့ အကြောင်းကြားရပေဦးမည်။
ရန်ကုန်မှ ထွက်လာကတည်းက အေးသာယာကားဂိတ်တွင် လာကြိုရန်အစောကြီးကတည်းက ကားစီစဉ် ပေးထားမည်ဆိုသဖြင့် သတ်မှတ်ချိန်တွင် ရောက်မလာပါက အဖွဲ့သားများစိတ်ပူပေတော့မည်။ ဒီတော့လည်း မိုးရေထဲမှာ ရှာပေဦးတော့တယ်လီဖုန့်းHand Phoneကြီးလက်ကကိုင်ပြီးLine Phoneလိုက်ရှာရသည့် အဖြစ်က ရယ်စရာကောင်းလှပေသည်။ ပြွန်တန်ဆာမှာ ဖုန်းလိုင်းမှမမိပေဘဲကိုး။ မြို့ထဲရှိလူများကလည်း ကားပျက်သဖြင့် အလျှိုလျှိုထွက်လာပြီး စပ်စုကြသဖြင့် ကားလမ်းမတစ်လျှောက်ဘုရားပွဲအလား စည်ကားလှသည်။ ကိုးရိုးကားရား ဘောင်းဘီရှည်နှင့်တီရှပ်အင်္ကျီဝတ်ကာ ဂျင်းစလွယ်သိုင်းအိတ်ကို တစ်စောင်းလွယ်လျှက် MP4 Player နားကျပ်တတ်ထားသော ကျွန်မပုံစံကို အထူးအဆန်းသဖွယ်ဝိုင်းကြည့်နေကြသဖြင့် ရှက်လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။
သို့သော် မတတ်နိုင် ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရဖို့က ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးပင် မေးရင်း၊ မြန်းရင်း ဖုန်း ဆိုင်ရောက်လာတော့ ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့် (ဒါရိုက်တာတုနှိုင်းခ)၏ Hand Phone သို့ ကားပျက်နေသည့် အကြောင်း သတင်းပို့ရလေတော့သည်။ ဗိုလ်ကြီးကစိတ်မပူဖို့အားပေးရင်း ကျွန်မ မလာမချင်းလာကြိုမည့် ကားကို စောင့်ခိုင်းထားမည်ဆိုသဖြင့် စိတ်အေးသွားရသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် တောင်ကြီးမြို့သို့ ကိုယ့်အစီအစဉ် နှင့်တက်ဖို့ဆိုသည်မှာ အဝတ်အစားအိတ်များဖြင့် မလွယ်ကူလှပါ။
တစ်ကဏ္ဍအေးသွားပြန်သဖြင့် ရန်ကုန်မှ တော်တော်နှင့် မရောက်နိုင်သည်မှာသေချာလှသော “တောင်ပေါ်သား” ကိုသာ မျှော်ရင်း၊ တစ်မြို့လုံးပတ်ကာ လမ်းဘေးမုန့်သည်များဆီမှ အုန်းသီးကြော်မုန့်များ၊ အသားတုတုတ်ထိုးများ၊ ငှက်ပျောသီးမှည့်များမျိုးစုံအောင် ဝယ်စားပစ်လိုက်သည်။ အတူပါလာသော ကျွန်မ၏အမေနှင့်အန်တီမော်တို့နှစ်ယောက်က အပေါ့အပါးသွားရန် အိမ်ရှာကြလေသည်။
ရထားလမ်းအနီးရှိ အန်တီစန္ဒာဆိုသော သဘောကောင်းသည့် အန်တီကြီးတို့ သားအမိက လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ်ကြသဖြင့် အိမ်ထဲသို့ဝင်၍ ကျွေးသမျှစားကာ ခဏနားနေရသည်။ အန်တီစန္ဒာက ကျွန်မနှင့်စကားပြော နေရင်းမှာပင် မြင်ဖူးသလိုပဲ သမီးက မင်းသမီးလားဆိုသဖြင့် ရှက်ပြုံးပြုံးမိလိုက်သည်။
“ဟယ် သမီးက အပြင်မှာ အရပ်ကြီးအရှည်ကြီးပဲနော်၊ သီချင်းခွေတွေထဲမှာ သိပ် မသိသာဘူး” ဟု ဝမ်းသာအားရဆိုကာ
ဖော်ဖော်ရွေရွေနှင့် ဖက်လှဲတကင်းနှုတ်ဆက်သံကြောင့် အတူရှိနေ သော အန်တီမော်က ဝမ်းသာတစ်ကြီးဖြင့်
“ဟယ် ဒါဆိုသမီးက အန်တီသမီးနဲ့ခင်မှာပေါ့၊ အန်တီက မော်ဒယ်လ်ဝတ်ရည်ရဲ့အမေလေ၊ အခုဝတ်ရည်ရှိတဲ့တောင်ကြီးကို သွားမလို့လေ” ဟုဆိုသဖြင့် အံ့ဩသွားရပြန် သည်။
“ဝတ်ရည်” ဆိုသည်မှာကျွန်မထက်အများကြီး Senior ကျသောSuper Model တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးသည် မဟုတ်လား၊ အန်တီမော်ကပြောသေးသည်။ တစ်ချိန်လုံးထမင်းအတူစားလိုက်၊ မြို့ထဲပတ်လိုက်နှင့် နာရီပေါင်းများစွာ အတူရှိနေပြီးကာမှ ဆုကဗျာမှန်းသိရသဖြင့် အားနာစရာဆိုနေသေးသည်။
“ဘာအားနာစရာရှိလို့လဲအန်တီရယ်၊ သမီးကနိုင်ငံကျော်မှ မဟုတ်ပဲ” ဟု အရှက်ပြေပြောလိုက်ရသေးသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခရီးသွားရင်းမထင်မှတ် ဘဲ၊ မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှာလည်း အမှတ်တရပင်ဖြစ်သည်။
အမှောင်ထဲတွင် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလှအောင်စောင့်ရင်း ည(၁၂း၃၀)နာရီအချိန်ရောက်မှ ကိုယ်ရွှေ “တောင်ပေါ်သား” ကြွကလာသည်။ မောင်းမည့်Driverမရှိ၍လိုက်ရှာနေရသဖြင့် အချိန်မကြာသင့်ဘဲ ကြာခဲ့ရလေသည်။ ရှေ့ဆက်ခရီးဆက်ဖို့ပစ္စည်းများ၊ လူများချိန်းကာ ပြွန်တန်ဆာမြို့မှ ည (၁းဝ၀)နာရီထိုးခါနီး တွင်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်။ ကားထွက်ချိန်အထိ မအိပ်သေးဘဲ၊ လိုသမျှမညည်းမညူ ကူညီပေးခဲ့သော ပြွန်တန်ဆာ မြို့သူအန်တီစန္ဒာတို့ သားအမိကိုများစွာ ကျေးဇူးတင်မိသည်။ မြို့ပြတွင် ကြုံခဲ့လှသော ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကို အပြည့်အဝတွေ့ရလေသည်။
လူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းနေသော ခရီးသွားများကို “တောင်ပေါ်သား”ကဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်အဖြစ် V.C.D များ တစ်ခွေပြီးတစ်ခွေဖွင့်ပြတော့သည်။ ထိုအထဲတွင် တစ်ချိန်က ဆရာဦးမြတ်ခိုင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သော “ဘိုဖြူ” သီချင်း V.C.D ကိုလည်း အမှတ်တရပြန်လည်ကြည့်လိုက်ရသေးသည်။ ညည့်နက်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ခေါင်းချလိုက်သည်နှင့်တစ်ချိုးတည်းအိပ်ပျော်သွားလေသည်။ ပြန်လည်နိုးလာ ချိန်တွင်တော့ တပ်ကုန်းမြို့သို့ပင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မိုးစင်စင်လင်းနေသဖြင့် တပ်ကုန်းမြို့အလှကို လေ့လာကြည့်ရင်း ဩဇာသီးဖွေးဖွေး လေးများကို မြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သေးသည်။
Breakfast စားဖို့ရပ်ပေးသော ဆိုင်မှာပင် ထမင်းဆီဆမ်းစားရင်း ကားပေါ်တွင် ခင်မင်လာသော တပ်ရင်းမှူး ကတော်တစ်ယောက်မှာ လသားအရွယ်နှင့် (၂)နှစ်သမီးအရွယ် သမီးလေးနှစ်ယောက်နှင့် လုံးလည်ချာလည်လိုက် နေသဖြင့် မနေတတ်၊ မထိုင်တတ်ဖြစ်ကာ အကြီးမလေးကို တစ်လမ်းလုံးခေါ် ထားကာ ထိန်းပေးရသေးသည်။ ဘယ်ဘဝကုသိုလ်လည်းမသိပါ၊ ကလေးတော်တော်များများက ကျွန်မ ဆိုလျှင် လွယ်လွယ်နှင့်ခင်မင်သွားတတ် သည်ကများသည်။ ကလေးသဘာဝဆော့ကစားရင်း၊ တစ်လမ်းလုံး ဟိုမေး ဒီမေးဖြင့် စကားပြောလာသော ကလေးမလေးကြောင့် အပျင်းတော့ ပြေရသည်။ သည်လိုနှင့် နေ့လယ်(၁းဝ၀)နာရီအချိန်တွင် ကလောမြို့သို့ ရောက်လာတော့သည်။ ထိုသားအမိ သုံးယောက်လည်းလာကြိုနေသော စစ်ကားပေါ်သို့တက်သွားစဉ် ကလေးမလေး မှာနှုတ်ဆက်၍ မဆုံးဖြစ် နေသေးသည်။ အောင်ပန်းရောက်လာ၍ မြို့ထဲရှိစားသောက်ဆိုင်တွင် ခေတ္တနားစဉ် ဆိုင်အတွင်း ရှိလိုင်းဖုန်းမှ မဆုကဗျာ ဖုန်းလာနေပါတယ်ဟုဆိုသဖြင့် အထူးအဆန်းဖြစ်သွားရလေသည်။
အေးသာယာ ကားဂိတ်မှ ရဲဘော်များက မနက်မိုးလင်းကတည်းကစောင့်နေတာ နေ့လယ် (၂းဝ၀)နာရီထိုးချိန်အထိမလာ သေးသဖြင့်စိတ်ပူ၍ ဤဆိုင်သို့ရောက်မရောက် လှမ်းမေးချိန်နှင့်ကျွန်မတို့ကားဆိုက်ချိန်သွားတိုက်ဆိုင်နေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောင်ပန်းလိမ္မော်သီး ချိုချိုလေးများက ပင်ပန်းခဲ့သမျှအမောပြေစေခဲ့သည်။ ဒေသတစ်ခု ရောက်လျှင် ဒေသထွက်အစားအစာများ ကို စုံအောင်စားတတ်သော ကျွန်မအတွက် ရှမ်းပေါက်စီပူပူလေးများက အထူးနှစ်သက်စရာ ကောင်းပေသည်။
ရန်ကုန်မှပေါက်စီများလိုမဟုတ်ပဲ၊ ဂျုံသားအိအိလေးမှာ နွေးနွေးထွေးထွေး နှင့်စားလို့ကောင်းလှသည်။ ရပ်စောက်အကျော်လောက်တွင် ဖုန်းဖွင့်လိုက်သောအခါ ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်၏ စိတ်ပူသံကို အတိုင်းသားကြားလိုက်ရသည်။ တစ်ကယ်ဆို မနက် (၆းဝ၀)နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်သင့် သည့်ကားမှာ နေ့လယ် (၂းဝ၀)နာရီအထိရောက်မလာသေးသဖြင့် တစ်ချိန်လုံးဆက်နေသည်ဟု ဆိုသဖြင့် ကြားထဲက အားနာသွားရပြန်သည်။
ဟဲဟိုးသို့အဝင်တွင် လမ်းတစ်လျှောက်သိမ်းဆည်းထားသော အနွေးထည်များမှာ အသုံးဝင်တော့၏။ လတ် ဆတ်သော လေနုအေးတစ်ဖြူးဖြူးလေးက ပင်ပန်းခဲ့သမျှ ပြေပျောက်ခဲ့ရသည်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသ၏ သီးနှံစိုက်ခင်းများကလည်း ကားလမ်းမတစ်လျှောက်အနှံ့အပြားတွေ့ရသည်။ ဂေါ်ရခါးသီးခင်းကြီးများ ကလည်း လှမှလှပေတကား။ ရှမ်းဝတ်စုံများနှင့်ဒေသသံတိုင်းရင်းသားများကလည်း စိုက်ခင်းများအသီးသီး တွင် တာဝန်ကိုယ်စီ နှင့်ထင်ရှူးပင်ကြီးများကလည်း လွန်စွာပေါများလှပေသည်။
အခက်အခဲပေါင်းစုံကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ညနေ (၄းဝ၀)နာရီထိုးချိန်မှာတော့ အေးသာယာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာ ပါတော့သည်။ ကျွန်မတို့ တောင်ပေါ်သားကားဆိုက်သည်နှင့်လူတစ်ဦးအပြေးအလွှားလာကြိုနေသည်ကို ကားမှန် ပြတင်းပေါက်များမှ တစ်ဆင့်တွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်မလည်း ရမ်းသမ်းပြီးလက်ပြလိုက်တော့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က
“သမီးကိုမနက်ကတည်းက မျှော်နေတာ၊ ဘယ်အထုပ်တွေသယ်ရမလဲ၊ ကားကဟိုဘက်မှာ”
ဟုဆိုပြီးတိုင်း (အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်)မှ လာကြိုသောTown Ace အဖြူလေးကို လက်ညှုိးထိုးပြလေသဖြင့် ကားရှိရာသို့ အချစ်တော်ဝက်ဝံရုပ်လေးကို ပိုက်ကာကို့ရိုးကားယား လှမ်းခဲ့လိုက်သည်။ ကားပေါ်မှရဲဘော်တစ်ဦးက ကားတံခါး ဖွင့်ပေးသည်နှင့် ဟန်ကျပန်ကျပစ်လှဲ လိုက်သေးသည်။ အန်တီမော်(ဝတ်ရည်မိခင်)ကိုလည်း တောင်ပေါ်သို့လမ်းကြုံ ခေါ်တင်ကာပစ္စည်း အားလုံး စုံပြီမို့ အေးသာယာကားဂိတ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ကားဂိတ်ဝင်းမှ အထွက်တွင် ရုတ်တရက်သတိရလိုက်ပြီး
“ဟောတော့်၊ စောစောကသမီးကို လာကြိုပြီး ပစ္စည်းတွေတင်ပေးတဲ့ဦးလေးကြီး ကျန်ခဲ့ပြီ ဆရာကြီးကားရပ်ပြီးပြန်ခေါ်လိုက်ဦးလေ”ဟု ကားမောင်းနေသော ရဲဘော်ကြီးကို အလန့်တကြား ပြောလိုက်မိသည်။ ရဲဘော်ကြီးက ကျွန်မကိုကြည့်ရယ်ရင်း “သူကဦးတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ ကားဝင်းထဲကလူ”
ဟု ဆိုသဖြင့် ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားရ၏။ ဒါဖြင့်အထုပ်တွေကူသယ်ပြီး သမီးကိုဘာလို့လာနှုတ်ဆက် ရတာ လဲဟု မေးလိုက်တော့
အနုပညာရှင်ရယ်လို့ဖြစ်လာကြရင်၊ ကိုယ့်ကိုပရိသတ်လက်ခံအားပေးသည်ကို နှစ်သက်လိုလားသူချည်းသာ ဖြစ်ပေ သည်။ ပရိသတ်တစ်ယောက်ပဲသိသိ၊ နှစ်ယောက်ပဲသိသိကျွန်မအလွန်ကျေနပ်မိသည်။
တောင်ကြီးမြို့သို့အတက်လမ်းတွင်ခရီးပင်ပန်းမှုဒဏ်ကြောင့်ခေါင်းကရိပ်ခနဲမူးလာသဖြင့် မှေး၍လိုက်ပါသွား လိုက်၏။ တောင်ကြီးမြို့မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့သည်နှင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်ပေပေါင်း(၄၇၁၂)ပေအမြင့်မှာတည်ရှိသော အေးချမ်းလှသည့် တောင်ကြီးမြို့သို့ရောက်လာခဲ့ပြီဟု သိလိုက်သဖြင့် ပျော်ရွှင်သွားရသည်။ တောင်ကြီးဟူသော အဓိပ္ပာယ်မှာ “တည်ပြီ”ဆိုသော အပင်တစ်မျိုးဟုအဓိပ္ပာယ် ရသည်ဟုသိရခဲ့၏။ ရာသီဥတုသဘာဝ ညီညွတ်မျှတမှုရှိပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် နွေရာသီအပန်းဖြေဖို့အတွက် သင့်တော်သော ဒေသလည်းဖြစ်သည်။
အန်တီမော်ဆင်းရမည့် သုခလမ်းထိပ်သို့အရောက်တွင် ကားရပ်လိုက်သည်နှင့်ဝတ်ရည်တစ်ယောက် အပြေးအလွှားရောက်ချလာပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်က သူမ၏မိခင်ကိုလာကြိုတာဖြစ်ပြီး မထင်မှတ်ဘဲ ကျွန်မကို တွေ့တော့ဝမ်းပန်းတစ်သာဖြင့် အိမ်သို့အလည်ခေါ်ပါတော့သည်။ ခရီးပန်းလာသည်ကတစ်ကြောင်း အဘ(ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာတင်သန်းဦး)နှင့်ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်တို့ စိတ်ပူကာမျှော်နေမည်ကတစ်ကြောင်း ကြောင့် စပ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှတည်းခိုရန်စီစဉ်ထားသော အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့သာ ဦးတည်လာခဲ့လိုက်သည်။
တိုင်းသို့အရောက်တောင်ကုန်းထိပ်ကလေးများပေါ်မှ အိမ်ကလေးများက အစီအရီနှင့်ချစ်စရာကောင်းလှသည် ကိုမြင်ရတော့သည်။ ကျွန်မတို့သားအမိအတွက် စီစဉ်ထားသောအခန်းရှေ့သို့အရောက်၊ မနက်ကတည်းက ရောက်နှင့်နေသော အဆိုတော်ကိုညီသစ်ထူးက လက်ပြကာနှုတ်ဆက်ရင်း
“ညီမလေး၊ ငါတို့ဒီနေ့ညအပြီးရိုက်မှာ၊ အဖွဲ့တွေကိစ္စ ရှိလို့မနက်ဖြန်ပြန်ရတော့မှာလေ”ဟူသောစကားကရင်ဝသို့ဆောင့်ကန်တာထက်ပြင်းထန်လှပေသည်။
ဘယ်နှယ့် အခုမှ ကားပေါ်ကဆင်းလာတယ်။ အချိန်ကလည်းလင့်နေပြီ။ ညတွင်းချင်းဝုန်းဒိုင်းကျဲရိုက်ပြီးပြန်ရမှာတော့ မနိပ်သေးပါဘူး။ ရောက်လာမှတော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာပဲဟုတွေးပြီး အိပ်ရာထဲသို့တန်းကွေးပစ်လိုက်သည်။ တစ်အောင့်ကြာတော့မြဝတီမှ ထုတ်လုပ်ရေးမှူး မဗိုဗိုအောင်နှင့်ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်တို့ရောက်လာပြီး ခရီးစဉ် တစ်လျှောက်မှ အဖြစ်အပျက်များကို မေးမြန်းပြီး Shootingတည်မည့်အကြောင်းပြောပါသည်။
ပင်ပန်းနေ ပေမယ့်လည်း အလုပ်လုပ်ဖို့လာတာပဲရိုက်ရတော့မှာပေါ့ဟု အားတင်းပြီးအချိန်ကြည့်တော ညနေ (၅းဝ၀)နာရီထိုးနေ ပြီ၊Shooting က ည(၈းဝ၀)နာရီစမည်ဆိုသဖြင့် Make up လိမ်းပြီးပြင်ဆင်ဖို့အနည်းဆုံး (၁)နာရီနှုတ်လိုက် လျှင်။ အိပ်ချိန်(၂)နာရီရသေးဖြင့် ဖုန်း Alarmပေးကာအိပ်ပစ်လိုက်သည်။
Alarmသံပြည့်သွားတော့ခေါင်းကဘယ်လိုမှ မထူနိုင်တော့၊မနေ့ညကတစ်ညလုံးကောင်းကောင်းမအိပ်ရသေးသဖြင့် မူးနောက်နေသည်။ကြိုးစား၍ထကြည့်သေးသည်။ ဘယ်လိုမှမရပါ၊ သည်ပုံစံနှင့်ရေချိုး၊ Make up လိမ်းဖို့တောင်အနိုင်နိုင်။
ဗိုလ်ကြီး၏လက်ကိုင်ဖုန်းကိုလှမ်းဆက်တော့ Dinning Room မှာအဖွဲ့တွေစုံနေပြီ ထမင်းလာစားတော့ဟု ဆိုသဖြင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။ နားလည်မှုအပြည့်အဝပေးသော ဗိုလ်ကြီးက ပင်ပန်းနေပြီနားလိုက်ပါ၊ နောက်နေ့မှရိုက်လို့ရတာပဲဟုပြောလာသဖြင့် ဝမ်းသာသွားရသည်။ တစ်အောင့် ကြာတော့အဘရောက်လာပြီး၊ ဆေးတိုက်ကာဂရုတစ်စိုက်မေးမြန်းပြီး၊ ကိုယ်နွေးနေသဖြင့် အိပ်လိုက်ပါတော့ဟု ပြောရှာသည်။
ဝတ္တရားမပျက်၊ Phoneလှမ်းဆက်ပြီး ချမ်းချမ်းနှင့်တစ်ညလုံးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျသွား၏။
နောက်တစ်နေ့မနက် (၆းဝ၀)နာရီထိုးသည်နှင့်ရေချိုး၊ Make up လိမ်းပြီးညက အြွေကးကို အတိုးချဆက် ရန် ပစ္စည်းများသိမ်းReady လုပ်ထားလိုက်သည်။ အခန်းတံခါးခေါက်သံကြောင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကြီးညီသစ်ထူးကBreakfast စားရန်လာခေါ်နေသည်။ Canteen တွင် ရှမ်းရိုးရာမြီးရှည်ပူပူလေးကို နှစ်ပွဲဆက်တိုက်စားပစ်လိုက်သည်။ တိုင်း-ထဲမှာပင် တည်ထားသော Scene ပေါ်သို့အရောက် Opening Scene ကအလွမ်းတဲ့။ (ဦး) စိုင်းထီးဆိုင်၏ “သိပ်ချစ်ရတဲ့နွဲ့တင်” သီချင်းအတွက် မျက်ရည်ကျရမည်။ ကဲ ငိုပေဦးတော့ဆုကဗျာ၊ အရေးထဲမျက်ရည်ကဝဲ၍သာဝဲဝဲလာပြီး ပါးပြင်ပေါ်သို့ကျမလာပါ၊ အဘကစိတ်ရှည် လက်ရှည်နှင့်စောင့်ပေးပါသည်။ သို့သော် ရွှေမျက်ရည်ကဘယ်လိုမှရွာသွန်းဖြိုးမလာပါ။ အရှက်တော့ကွဲပါပြီ၊ အဘနှင့်ကလည်းအခုမှစဆုံဖူးတာ၊ ကျွန်မအသုံးမကျတာသိကုန်ရင်တော့ အခက်ပဲဟုတောင်တွေးမြောက်တွေး ကာ MOOD ထည့်လည်းမရရေးချမရပါ။ မနေနိုင်တဲ့အဆုံး မြဝတီမှမမေသက်ပိုင်က မျက်စဉ်းဗူးဌားသဖြင့် အငှားငိုလိုက် ရသည့်အဖြစ်သို့ရောက်သွားခဲ့လေသည်။
အဘကတော့ သမီးစိတ်တင်းထားလို့ MOOD မဝင်တာပါ၊ စိတ်အေးအေးထားပါပြောရင်း၊ မျက်စဉ်းသာ တွင်တွင်ထည့်ခိုင်းလေတော့သည်။
ရိုက်ကူးရေးသင့်သလောက်ရပြီမို့မနက် (၁၀းဝ၀)နာရီလောက်မှာတော့ အင်းလေး သို့ပစ္စည်းများနှင့်တစ်ပါတည်းဆင်းလာခဲ့ကြရသည်။ တောင်ကြီးမြို့တစ်ပတ်ပတ်ပြီးလျှောက်လည်မည်ဟူသော စိတ်ကူးလည်းအကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ပေ။ အဘကအဖွဲ့သားအချို့နှင့်ကားတစ်စီး၊ ဗိုလ်ကြီး၊ ညီသစ်ထူးတို့ သားအမိသားအဖ(၃)ယောက်နှင့်ကျွန်မတို့သားအမိက ကားတစ်စီးစီဖြင့် ညောင်ရွှေမြို့ရှိQueen Inn သို့ရောက် လာခဲ့ကြသည်။
ညောင်ရွှေမြို့နယ်သည် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးခရိုင်တွင်ပါဝင်ပြီး မြို့နယ်အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် တောင်နှင့်မြောက်သွယ်တန်းလျက်ရှိသော တောင်တန်းနှစ်ခုရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ဆီဆိုင်မြို့နယ်နှင့်တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ကလောမြို့နယ်နှင့်ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက် တွင် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့နှင့်ဆက်စပ်တည်ရှိလျက်ရှိသည်။ ရှေးအခါက စော်ဘွား မင်းအဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်စိုးစံခဲ့ရာ “ဆီဆိုင်ဘွား” အမည်ရှိစော်ဘွားသည် မြို့တော်သစ်၏မင်္ဂလာရှိသောအရှေ့ အရပ်၌ ဣဿရိယကုန်းတော်ရှိ၍ ယင်းကုန်းတော်ပေါ်၌ရွှေအဆင်းရှိသော ဗောဓိညောင်ပင်ပေါက်ရောက်သည်ကို အစွဲပြု၍ “ညောင်ရွှေမြို့”ဟု သမုတ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိခဲ့ရပါသည်။
ညောင်ရွှေမြို့နှင့်ပတ်သက်၍ ရှေးမြန်မာမင်းများနှင့်ရှမ်းစော်ဘွားများလက်ထက်၊ ညောင်ရမ်းနှင့်ညောင်ရွှေ နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် နေထိုင်ကြသော ဗမာလူမျိုးများနှင့်ရှမ်းလူမျိုးအချို့အပေါ် “ဒဿမေဓ” အခွန်တော် ကောက်ခံရေးအတွက်
“ဗမာညောင်ရမ်း၊ ရှမ်းညောင်ရွှေ”ဟူ၍သတ်မှတ်စကားပုံတစ်ခုရှိခဲ့သည်ဟု လေ့လာခဲ့ ရသည်။ ယင်းစကားပုံ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် အခွန်တော်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာ၌ ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေရန်မည်သည့်နယ်ပယ်အတွင်းမှာပင်နေနေ “ဗမာမှန်လျှင် ညောင်ရမ်းက အခွန်ကောက်၍ ရှမ်းမှန်လျှင် ညောင်ရွှေကအခွန်တော်ကောက်ခံရန်” ဟူ၍ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားလေသည်။
Queen Inn တွင်နေရာချထားပြီးသည်နှင့်ဝါးတီးဖွင့်ဖို့ ဗိုက်ကဆန္ဒပြနေတော့သည်။ ထမင်းစားပွဲတွင် ထိုင်လိုက်သည်နှင့်ပထမဦးဆုံးလာချသော ဟင်းရည်ကိုဗိုက်ဆာဆာနှင့်သောက်ချပစ်လိုက်သည်။ သောက်ပြီးမှ ဆေးခါးဟင်းရည်မှန်းသိရသည်။ ရိုးရာပဲစိများနှင့်ချက်ထားသော ဆေးခါးဟင်းမှာအရသာရှိလှပေသည်။ အင်းလေး ရိုးရာဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သော ငါးပေါင်းဟင်းနှင့်ထမင်းကိုခေါင်းမဖော်တမ်းလွှေးပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ခဏနား ပြီး ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်များ ဆက်လက်ရိုက်ကူးပြီးနေ့လယ် (၂းဝ၀)နာရီလောက်တွင် အင်လေးကန်သို့ သွားရန်မှာထားသော စက်လှေရောက်လာသဖြင့် လိုအပ်သော အဝတ်အစားအနည်းငယ်ယူကာ အင်းလေးရေ စပ်အနားမှာပင်တည်ထားသောQueen Inn မှ အဖွဲ့သားများ စက်လှေသံတဖုတ်ဖုတ်ဖြင့် အင်းလေးကန်တစ် လျှောက် ပျော်ရွှင်စွာစီးလာခဲ့ကြသည်။
အင်းလေးကန်အတွင်းသဘာဝကျွန်းမျောရိုင်းများ၊ ရေညှိရေမှော်ပင်များ၊ ဗေဒါအပါအဝင်ကြာမျိုးများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သဘာဝကျွန်းမျောရိုင်းနှင့်ကျွန်းသေများပေါ်တွင် မြက်ခါး၊ မြက်ဒယ်အိုးပုတ်၊ ဒေါင်းစပါး၊ ဗျိုက်၊ ဗလချိုက်၊ ဖောင်း၊ ပိန်း၊ ဇရစ်၊ ကနဖော့၊ ငွေပန်း၊ ပိတ်စွယ်၊ ကန်စွန်း၊ ကျူပင်များပေါက်ရောက် ပြီးရေတိမ်ဖို့မြေများတွင် မိုးမခ၊ ရေတိန်၊ ရေပိတုန်း၊ ညောင်၊ ခံတက်၊ ပေါက်၊ စစ်နှင့်ကသစ်ပင်တို့ ပေါက် ရောက်တတ်ကြောင်းလည်းသိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ရုက္ခပင်များသည် ရေနေသတ္တဝါများ၊ ငှက်များကျက်စားပေါက် ဖွားရာဖြစ်သည့်အပြင် ရေကြည်လင်စေသည့် သဘာဝရေစစ်များအဖြစ်သို့၎င်း၊ ရေနှင့်လေထုအတွင်းရှိကာဗွန် ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို လျော့ကျစေပြီး အောက်ဆီဂျင်ပံ့ပိုးပေးသူများအဖြစ် ၄င်းအကျိုးပြုကြသည်။
မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးကျွန်မအတွက် အဆန်းအပြားပင်ဖြစ်နေ၏။ တစ်ကယ်ဆိုတစ်ချိန်က ရေလမ်းခရီးသွားဖို့အလွန် ကြောက်လန့်ခဲ့သောကျွန်မအတွက်၊ ယခုအချိန်ရေကူးတတ်ပြီးစအချိန်တွင် အင်းလေးရေကန်မှရေမျက်နှာပြင်ကို စက်လှေသွားရာလမ်းတစ်လျှောက် လက်နှစ်၍ ဆော့ကစားရဲလောက်အောင် အရဲကိုးသွားပါသည်။
အကြောင်းမှာညောင်ရွှေမှအင်းလေးကန်ရေလမ်းတစ်လျှောက်ရေအနက် (၆)ပေရှိပြီး၊ ရေနည်းချိန်တွင် ထိုလမ်းပိုင်း၌အနက်(၂)ပေခန့်သာရှိမည်ဟု အင်းသားကြီးများ၏ပြောစကားကြောင့် အတင့်ရဲခြင်းလည်းဖြစ်၏။
အဘကတော့တစ်လမ်းလုံးအဖွဲ့သားများကို ဂရုတစ်စိုက်နှင့်မှာကြားလိုက်၊ (Camera Man ရွှေမိုးဦး) ဦးမိုးကြီးကို ရှုခင်းအလှများရိုက်ရန်နှင့်ကိုညီသစ်ထူးနှင့် ကျွန်မတို့၏စုံတွဲအလှ Love-Scene ရိုက်ရန် ညွှန်ကြားလာခဲ့လေ သည်။ စက်လှေပေါ်မှာ လေတဖြူးဖြူးတိုက်ချိန်နှင့်နေလုံးကြီးက ဝင့်ထည်စွာထွက်ချိန်နှင့်ကွက်တိမျက်မှန်များ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်တပ်ကာပဲများကြစဉ် ဘေးမှဖြတ်သွားသော စက်လှေများက အော်ဟစ်ကာ လက်ပြနှုတ်ဆက် ကြသဖြင့် ပျော်ဖို့အလွန်ကောင်းလှပေ၏။
အင်းလေးကန်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကုန်းတွင်းရေအိုင်ကြီးများအနက် အကြီးဆုံးရေအိုင်ကြီးများတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဟုသိရသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ (၂၈၉၇.၄၅၅)တွင်တည်ရှိပြီး၊ ယခုအခါ ကန်၏အလျား (၁၁)မိုင်နှင့် အနံ(၄)မိုင်ရှိပါသည်။ တည်နေရာအနေအထားအရ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူကောင်းမွန်ခြင်း၊ ထူးခြားသောရေလယ်ရွာကြီးများနှင့် တန်ခိုးကြီးဖောင်တော်ဦးဘုရားတည်ရှိသဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ခရီးသွားဧည့်သည်များပါလာရောက်လေ့လာလည်ပတ်လောက်အောင် ထင်ရှားသော ရေကန်ကြီးဖြစ်ပေသည်။ ထို့ပြင် ဤရေကန်ကြီးကို အမှီပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသော ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် လုပ်သည့် လောပိတနှင့်ဘီးလူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကြီးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများထုတ်ဝေပေးလျှက်ရှိ ပေသည်။ ရေကန်တစ်လျှောက်လေများက ကြက်သီးမွေးတဖြန်းဖြန်းထကာ အေးချမ်းလှပေ၏။
လင်းကင်းရွာအရှေ့အင်းလယ်တစ်နေရာသို့ အရောက်တွင် ဟင်္သာရုပ်ကို တိုင်ထောင်ကာစိုက်ထားသည်ကို ထူးခြားစွာတွေ့ရသဖြင့် မေးကြည့်ရာ ဖောင်တော်ဦးဘုရားကြီးတွင် ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီး အပ်နှံထားသော သရက္ခာန်ရုပ်တော်မြတ်လေးဆူနှင့် သက္ကရာဇ် ၄၈၂ခုနှစ်တွင် အင်းတိမ်ဘုရားအသီတော်ဖြစ်သော မဟာဂါမ ရွာကျောင်းတော်၌ နရပတိစည်သူမင်းအပ်နှင်းပေးထားသော မြတ်ပေါင်းမဉ္ဇူဘုရားရုပ်တုတော်မြတ်တစ်ဆူ စုစုပေါင်း (၅)ဆူရှိလေသည်။
ဒေသစာရီကြွချီတော်မူသည့်အပူဇော်ခံပွဲ၌ ငါးဆူလုံးပင့်ဆောင်ခဲ့ရာ၊ ဤဟင်္သာရုပ်နေရာသို့ အရောက်တွင် လေကြီး၊ မိုးကြီးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတိုက်ခတ်သဖြင့် ဘုရားလှေတော်နစ်မြုပ်၍ ရုပ်ထုတော်မြတ် ငါးဆူအနက် လေးဆူသာ ရှာဖွေတွေ့ရှိပင့်ယူရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်လင်္ကျာရံရဟန္တတစ်ဆူမှာ ရှာဖွေစုံစမ်း၍မရရှိ ခဲ့ပဲကျောင်းတော်သို့အရောက် ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်ဖွင့်သောအခါမှသာ ဦးခေါင်းတော်တွင် မှော်များတင်လျှက်ပြန် လည်ဖူးတွေ့ရကြောင်းနှင့်တဖန်ပင့်ယူပြန်သောအခါတွင်လည်း ရှေးနည်းအတိုင်း မိုးလေသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း တိုက်ခတ်ပြန်သဖြင့် ၄င်းရဟန္တာရုပ်ထုတော်မြတ်တစ်ဆူကို ညတွင်းချင်းကျောင်းတော်သို့ပင်ပြန်ပို့ဆောင်သော အခါမှ မိုးစင်လေကင်းချမ်းသာခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ဘုရားကြီး၏တန်ခိုးတော်ကို အံ့မခန်းသိရှိခဲ့ ရပေသည်။
ဖောင်တော်ဦးဘုရားသို့ရောက်၍စက်လှေကပ်သည်နှင့်အဖွဲ့သားများအားလုံးဘုရားကြီးကို ရိုသေစွာ ဦးခိုက်ပူဇော်ကြသည်။ ကျွန်မကတော့ ဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်ငယ်လေးများအား အိမ်၌ပူဇော်ရန်ပင့်ဆောင်လာ ခဲ့သည်။ အဘကသိဒ္ဓိတင်ကား ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပေးပါသေးသည် ထိုအချိန်တွင် သာမန်မိန်းမသားဖြစ်ရသည့် ဘဝကို လွန်စွာအားငယ်သွားမိသည်။ ရွှေသင်္ကန်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကပ်ခွင့်မှမရပဲကိုး။ သို့သော်လည်း အဓိဌာန် ပြု၍စိတ်မှန်းဖြင့် ကပ်လှူပူဇော်ကာ ရိုသေစွာဆုတောင်းခဲ့သေးသည်။ ထိုကုသိုလ်ကံသည် မနှေးအမြန်ရောက် လာတော့မည့်အကြောင်းကို ကျွန်မထိုအချိန်က မသိရှိခဲ့ရပေ။ ဘုရားရှိခိုးပြီးသည်နှင့် ဈေးအတွင်းလှည့်၍အဖွဲ့ သားများShoppingထွက်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးထဲမှာ ထူးခြားသည်က ညီသစ်ထူးပင်ဖြစ်သည်။ အင်းထဲမှာ သူ့ပရိသတ်များကမနည်းပေပဲကိုးဟု ကောက်ချက်ချလောက်အောင်ထင်ရှားပေသည်။ သူ့ခမျာ ဟိုဆိုင်ကလာပါဦး၊ ဒီဆိုင်ကလာပါဦးနှင့်အင်းလေးသူများအကြားစန်းပွင့်နေပေ၏။ အင်လေးရိုးရာ ချည်ထည်နှင့်ဦးထုပ်ကိုလည်း အမှတ်တရဝယ်ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့မှန်းသိတော့ လူအုပ်ကြီးကသွားလေရာတစ်ကောက်ကောက်ပါလာသည်။ ဈေးဝယ်လည်း မလွတ်လပ်၊ မုန့်စားလည်းမလွတ်လပ်၊ အနုပညာသမားဖြစ်ရသည့်ဘဝကား အရာရာပရိသတ်မျက်လုံးနှင့် သဟဇာတဖြစ်ဖို့လိုသည်။ မီးရောင်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နေရသူများဖြစ်သဖြင့် အများထက်ပိုထင်ပေါ်သည်။ ကောင်းတာလုပ်လျှင်လည်း အလွယ်တကူသိနိုင်သလို၊ မကောင်းတာလုပ်လျှင်လည်း လွယ်လွယ်နှင့်သိနိုင်ပေ သည်။ မိမိက အမှတ်တမဲ့ လုပ်လိုက်မိသော အပြုအမူကို သေချာစောင့်ကြည့်ပြီးအပြစ်ပြောသူလည်းရှိ၏။ စိတ်လွတ်၊ ကိုယ်လွတ်အမူအရာများသည် အများအမြင်မှာမေးငေါ့ချင်စရာများဖြစ်သွားတတ်သည့်အတွက်အလွန် သတိထားရ၏။ ကိုယ့်ထမင်းရှင် ပရိသတ်ကိုလေးစားသမှုဖြင့် နွေးထွေးစွာ တုန့်ပြန်သင့်ပေသည်။
V.C.Dသီချင်းများအတွက် ရိုက်ရင်း၊ မြဝတီ၏ကဏ္ဍအချို့အတွက်လည်း ရောက်သည့်နေရာတိုင်း အလျဉ်း သင့်သလို ရိုက်သွားရသေးသည်။ အဘခမျာလည်း ပင်ပန်းလွန်းလှပေသည်။ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးသောက် လိုက်၊ ရိုက်လိုက်နှင့်အဖွဲ့သားများကိုလည်း ဂရုတစိုက်ရှိလှပေသည်။ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပေါ်မှ ပြန်ခွာလာတော့ ညနေ(၅း၃၀)နာရီနီးပါးပင်ရှိနေသည်။ ညောင်ရွှေသို့ နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်ပြန်မောင်းသွားရမည်ဖြစ်သဖြင့် စက်လှေကို စက်ရှိန်တင်၍ အမြန်မောင်းလာခဲ့ရသည်။
အပြန်လမ်းတွင် အဆိုတော်ညီသစ်ထူးမှ ဦးဆောင်၍ သီချင်းမျိုးစုံဟစ်ြွေကးကာ အပျော်ကြူးလာခဲ့ကြသည်။ နေဝင်တရောအချိန်ဖြစ်၍ လူကြီးများက ဘုရားစာ တတွတ်တွတ်ရွတ်ကာ အန္တရာယ်ကင်းရန်ဆုတောင်းနေကြသည်။ အင်းထဲတွင် ဓာတ်တိုင်မရှိ၊ မီးမရှိ အမှောင် ထဲတွင် အချက်ပြမီးလေးဖြင့်သာမောင်းနေသည်မှာ တစ်နာရီကျော်မကပင်ရှိလာပေပြီ။
သို့သော် ညောင်ရွှေ မြို့သို့ရောက်မလာသေးပေ။ အဖွဲ့သားများအားလုံးလည်း အခြေအနေကိုရိပ်မိကာ မျက်စိမျက်နှာပျက်လာကြ သည်။ သွားပါပြီ။ ကန်ထဲမှာ လမ်းပျောက်နေပြီ သီချင်းသံများလည်း ရုတ်ခြည်းတိတ်သွားကာ ဘုရားစာရွတ် သံများတစ်ယောက်တစ်ပေါက်ထွက်လာပါတော့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမီးပြကာရမ်းသမ်းမောင်းသွားလိုက်၊ တစ်ခါ တစ်ရံဒိုက်ပုံကြီးထဲ စက်လှေကရောက်သွားလိုက်နှင့်ဒုက္ခပင်လယ်ဝေသည်ပဲပြောရမလား။ ဒုက္ခကန်ထဲဝေသည် ပဲဆိုရမလားမပြောတတ်ပါ။ အနီးနားမှ ငါးဖမ်းလှေတစ်စီးတစ်လေတွေ့၍မေးတော့လည်း အင်းစကားလိုလို၊ ရှမ်းစကားလိုလိုတွေပြန်ပြောပါတော့သည်။ ပါလာသောစက်လှေသမားက သိပ်နားမလည်၊ လမ်းကလည်း မကျွမ်း၊ အမေလေးတ၍သာအော်ငိုချင်စိတ်များပေါက်လာပါသည်။
ချမ်းကလည်းအတော်ချမ်းလာပြီ။ စက်လှေက အရှိန်မြင့်လေ၊ ရေကစဉ်လေနှင့်တကိုယ်လုံးတုတ်တုတ်ရွှဲနေပြီ။ လမ်းကလည်းအစရှာမတွေ့ပြီ၊ ဘာများမှားယွင်း ခဲ့သလဲတော့မသိပါ။ အဘဦးဆောင်၍ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့၊ ဘုရားစာများ တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက် ရွတ်ကာ နောက်ဆုံးအင်းထဲတွင် စမ်းတစ်ဝါးဝါးဖြင့် နှစ်နာရီနီးပါးကြာအောင် မောင်းလာပြီး၊ ညောင်ရွှေမြို့၏ မီးရောင်ကိုတွေ့ရချိန်မှာတော့ ထီပေါက်သကဲ့သို့ ဝမ်းသာအားရဖြစ်ကာ သက်ပြင်းများတဟင်းဟင်းနှင့်ချမဆုံး ဖြစ်ကြရပါတော့သည်။ Inn ကိုပြန်ရောက်တော့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ကာ အဖွဲ့သားများ ရယ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဪသာ် အခုမှ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ရယ်နိုင်ကြပေသကိုး။
ထိုနေ့ညက ညစာသည်အခါတိုင်းညများထက် ပိုမြိန်သည်ဟုခံစားရသည်။ အဘက အဖွဲ့သားများကို စောစောအိပ်ဖို့ ဩဝါဒြွေခရင်း၊ မနက် (၄းဝ၀)နာရီReady လုပ်ထားဖို့ကျွန်မကိုသာတွင်တွင်မှာနေသည်။ ထွယ်မယ်ဟေ့ဆိုလျှင် အားလုံးကရေချိုး၊ အဝတ်အစားလဲရုံသာဖြစ်သဖြင့် ကျွန်မတစ်ယောက်မှာသာ Make up လိမ်းတာနှင့်အဝတ်အစားလဲတာအချိန်က မလောက်ငှ။ ဒါတောင်ဘုရားကိုအတိုချုံး ရှိခိုးရတာ အဘမသိ သေး။
22.9. 06/ A.M 4:30
အင်လေးဖောင်တော်ဦးဘုရားဒေသစာရြွီကချီ အပူဇော်ခံမည့်နေ့ နံနက်(၄း၃၀)နာရီအချိန်ကတည်းက ညောင်ရွှေမြို့မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့သားများအားလုံးမှာ ဘယ်သူ၊ ဘယ်သူမှစကားမပြောနိုင်ကြဘဲ ချမ်းအေးလှသော အင်းရေပြင်ပေါ်မှ အမိုးအကာမဲ့စက်လှေကို အနွေးထည်အထပ်ထပ်ဖြင့် ခေါင်းမဖော်တမ်းစီး လာခဲ့ကြသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်ဘုရားဖူးစက်လှေများကို ဆွမ်းတော်ဗန်းများကိုယ်စီနှင့်တွေ့ခဲ့ရသေးသည်။ နိုင်ငံခြားသားများကလည်း ကင်မရာကိုယ်စီနှင့်အသင့်နေရာယူထားပြီလေ၏။
ဘုရားပေါ်သို့ရောက်တာ့ မနက် (၆းဝ၀)နာရီထိုးခါနီးနေပြီ၊ ဘုရားပတ်ပတ်လည်တွင်လည်း စစ်တပ်မှ စက်လှေများလုံခြုံရေးစောင့်ကာ အထပ်ထပ်ချထားသည်ကိုတွေ့ရ၏။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားက မနက်(၄းဝ၀)နာရီ ဖြစ်သဖြင့် ညကတည်းက Camera Man ဦးမိုးကြီးနှင့် ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်တို့ကို အင်းထဲရှိ ရွှေအင်းသား Hotel မှာနေစေကာ အခမ်းအနားမှ အမှီရိုက်ယူစေခဲ့သော အဘ၏ဝီရိယကလေးစားဖွယ်ပင်။
ဂေါပကအဖွဲ့မှတည်ခင်းကျွေးမွေးသောမုန့်ဟင်းခါးကို အဖွဲ့သားများတက်သုတ်ရိုက်ကာစားပြီး၊ တရားနာ၍ အမျှဝေဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်အထိ ထူးခြားစွာပေါ်လာမည့် ကုသိုလ်ကံကိုမသိရသေး။ အမျှဝေပြီးသည် နှင့်ဘုရားစံကျောင်းတော်မှ ဖောင်တော်ငယ်ပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်တော့မည်ဟု ကြော်ငြာလိုက်သည်နှင့်ဘုရားဖူး များရှေ့သို့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲထလာကြပါသည်။ ထိုအချိန်အထိ တုံးအ လှသော ကျွန်မသဘောမပေါက်သေး။ လူကြားထဲညှပ်မိမည်စိုးသဖြင့် နောက်သို့ပင် ဆုတ်ကာ ဖယ်ပေးလိုက်သေးသည်။
အဘကမျက်ရိပ်ပြကာအဖွဲ့သားများကို ဘုရားကြွချီရန်ကာထားသော လမ်းအတွင်းသို့ အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေး၍ ခေါ်ချလာပါသည်။ Uniform ဝတ်ထားသော အဘတင်သန်းဦး၏မျက်နှာကြောင့် အူလည်လည်ဖြင့် V.I.P တန်းထိပ်သို့ ကျွန်မရောက်ရှိသွားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်မှ သဘောပေါက်ပါပြီ၊ အမေက လူအုပ်ကြီးထဲမှ တိုးဝှေ့၍ ရွှေသင်္ကန်းငါးစုံဝယ်လာပါတော့သည်။ ဘုရားရုပ်ထုတော်မြတ်များ ဤလမ်းအတိုင်းဆင်းလာ၍ အမျိုး သမီးများ ရွှေသင်္ကန်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကပ်ခွင့်ရသည့် အခွင့်ထူးကို ကျွန်မရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားတစ်ဆကြွလာသည်နှင့်ရွှေသင်္ကန်းတစ်ခုကပ်လိုက်၊ စစ်တပ်မှ လုံခြုံရေးများကလည်း လူအုပ်ကြီးကို ကာလိုက်နှင့်ရွှေသင်္ကန်း(၄)စုံကပ်ပြီးချိန်အထိ ကျွန်မဟန်ကျနေပေသည်။ ဘုရားလေးဆူလုံးကပ်ပြီးချိန်တွင်မှ အဘက နဖူးနဲ့တိုက်လိုက်ရလားဟုမေးပါသည်။
“ဟင့်အင်း၊ မသိဘူးလေ၊ နဖူးနဲ့တိုက်လို့ရလား”ဟူသော ကျွန်မ၏ အူကြောင်ကြောင်အမေးကြောင့်အဘက “လာ”ဟုဆိုကာလှေခါးအဆင်းသို့ဆင်းခါနီးနေပြီဖြစ်သော နောက်ဆုံးဘုရားတစ်ဆူဆီသို့ ဆွဲခေါ်သွားပါတော့သည်။
အဘမျက်နှာကြောင့်ဗိုလ်မှူးများ၊တာဝန်ရှိသူများက လမ်းဖယ်ပေးသော်လည်း ကုသိုလ်ကံကုန်သွားသဖြင့် လက်ကျန်ရွှေသင်္ကန်းတစ်ခုသာ၊ ကပျာကယာကပ်လိုက် ရပြီး၊ နဖူးနှင့်ထိတွေ့ခွင့်မရခဲ့တော့ပေ။ လူအုပ်ကြီးကြား၌ အေးချမ်းချိန်တွင် ချွေးပြန်ရသည့်အဖြစ်ပင်။ အသုံးမကျ၊ မပါးနပ်၍ အဘကစက်လှေပေါ်သို့အရောက်တွင် ဂရုဏာဒေါသောဖြင့်ဆူပါတော့သည်။ ရသင့်၊ ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေးကိုမယူတတ်လေခြင်းဟုဆိုသေးသည်။ ထို့နောက် နံနက်(၇းဝ၀)နာရီချိန်တွင် ဖောင်တော်ဦးဘုရား နှင့် (၃)မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိသော အင်းတိန်ကျေးရွာသို့ ညဖက်ကျိန်းရန် လမ်းတစ်လျှောက်အကအဖွဲ့လှေများ၊ ဝတ်ရွတ်လှေများ၊ ခြေနင်းလှေအဖွဲ့သားများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ပင့်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။
ရှမ်းအဖွားကြီးများဆိုလျှင် ကိုယ်တိုင်လှေလှော်၍ ဆွမ်းတော်ဗန်း၊ သောက်တော်ရေချမ်းများနှင့် ဘုရား ဖောင်တော်မလှမ်းမကမ်းမှနေ၍ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။ ထူးခြားသည်မှာ ရန်ကုန်တွင် မကြားရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော ဗြောက်အိုးဖောက်သံများသောသော ညံနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်လှေပြီးတစ်လှေ အတွဲလိုက် ဖောက်နေကြသော ဗြောက်အိုးသံများမှာ အထိတ်တလန့်ရှိလှပေသည်။ လှေတစ်စင်းက ဘေးကဖြတ်သွား လိုက်၊ ဗြောက်အိုးဖောက်သွားလိုက်နှင့်သေနတ်ပစ် လေ့ကျင့်ကွင်းထဲရောက်နေသလားဟုအောက်မေ့ရသည်။
ဘယ်အချက်ကိုယ့်လှေပေါ် ဗြောက်အိုးနှင့်လှမ်းပေါက်မလဲဟု ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နှင့်နေခဲ့ရသည်။ ထိုအဖြစ် အပျက်ကြောင့်ဆရာဦးမြတ်ခိုင်ဗုဒ္ဓဂယာသွားခဲ့စဉ်က ဟက်ပီးဒေဝါလီညတွင် ဗြောက်အိုးများ တစ်ဒိုင်းဒိုင်းဖောက်ကာ၊ ပျော်ကြပါးကြသည်ဟုဖတ်ခဲ့ဖူးသဖြင့် ယခုလိုမျိုးပဲဖြစ်မည်ထင်သည်ဟု ယှဉ်တွေးမိခဲ့သေးသည်။ ရေပေါ်နှင့် ကုန်းပေါ်ပဲကွာပေပြီ၊ ဗြောက်အိုးရန်ကတော့ အတူတူပင်ဖြစ်မည်ဟုယူဆမိခဲ့သည်။
ကျွန်မတို့လှေမှာစက်မနှိုးဘဲ ရေစီးအတိုင်းတက်ဖြင့်အသာမျောကာ ဖောင်တော်ငယ်နောက်မှ ဆက်လက် လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။ ရိုးရာခြေနင်းလှေပေါ်မှ အင်းသားများကလည်း လှေချင်းကပ်၍စနောက်လာကြသည်။ သူတို့ကျီစယ်ပုံက ယဉ်ကျေးလှပေသည်။ မြို့ပြမှာလို ဗရုတ်သုတ်ခမဟုတ်ဘဲ ပွဲတော်ရက်ဖြစ်၍ ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်၍သီချင်းဆိုလိုက်၊ အသံမျိုးစုံဟစ်လိုက်နှင့် လှေချင်းကပ်နေသော်ငြားလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော် ကားခြင်းမရှိသည်မှာ လွန်စွာချစ်ဖို့ကောင်းသော အင်းသားများ၏ဓလေ့စရိုက်ပင်ဖြစ်၏။
ကျွန်မနှင့်စကားလက် ဆုံကျရင်းအပြန်အလှန်ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြသော ကိုညီသစ်ထူးနှင့်ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်ကို လှေများပေါ်မှ “ယောက်ဖ” ဟုအသံကုန်ဟစ်၍ စနောက်မြဝတီကအစ်မကြီးများကိုပါ လက်ညိုးထိုးပြရင်းအားလုံးငါ့သမီးတွေချည်းပဲ၊ ငါ့ကိုလည်း “ယောက္ခမ”လို့ခေါ်ကြလေကွာဟု အရွှန်းဖောက်တော့အားလုံးပွဲကျသွားရလေသည်။ နံနက်(၁၀းဝ၀)နာရီ တွင် တစ်ညတာကျိန်းမည့် အင်းတိန်ကျေးရွာသို့ ဖောင်တော်ဆိုက်ကပ်သည်နှင့်ကမ်းစပ်မှ ရွာသူရွာသားများက ဗြောက်အိုးများနားကွဲမတတ်ဖောက်၍ ကြိုဆိုကြပြန်သည်။
အမလေးနော် ဒီအထိဗြောက်အိုးဒဏ်ကမလွတ်နိုင်သေးပေ။ ရွာထဲသို့ အဘကအရင်ဝင်နှင်မည်။ အဖွဲ့သား များအားပြီးမှလာခေါ်မည်ဆိုသဖြင့် ကမ်းစပ်နဘေးရှိ အအေးဆိုင်ငယ်လေးမှာပင် အမောဖြေကာ ကိုယ်လက် သန့်စင်ကြရသည်။ တစ်အောင့်ကြာတော့ အဘက အခေါ်လွှတ်သဖြင့် ရွာထဲရှိပွဲဈေးတန်းများကို လှည့်ပတ် ကြည့်ပြီး အင်းတိန်ကြေးပေါခုံကျောင်းသို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ဗြောက်အိုးများကို လွတ်လပ်စွာ ဖျာခင်းရောင်း နေသဖြင့် ပြုံးမိသေးသည်။ အသားကင်ဆိုင်များ၊ ကော်ထည်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ မျက်လှည့်ပြခန်းများနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ ဝတ်ကောင်းစားလှများ ဝတ်ကာရှိုးပေးနေကြပုံများက ကြည်နူးစရာကောင်းလှသည်။
ကြေးပေါခုံကျောင်းမှတာဝန်ရှိလူကြီးများက နေ့လည်စာစားရန် စီစဉ်ပေးထားသော အင်းတိန်မူလတန်းကျောင်း သို့ အဖွဲ့သားများကို ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ပွဲဈေးတန်းကို ဖြတ်သန်းကြစဉ် နှုတ်ဆက်သံများ ဝေဆာကာ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အစ်မကြီးများကို “ဟိုမှာထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ ဟိုမှာဆုရွှန်းလဲ့” စသဖြင့် ရှိသမျှ မင်းသမီး နာမည်းများစုံအောင်လျှောက်ခေါ်နေကြသည်။
ဗီဒီယိုရုံမှလည်း ပြသသော ဇာတ်ကားများကို လော်စပီကာ ထုတ်ကာ အသံထပ်လွှင့်သဖြင့် ကျေးရွာဓလေ့ကို ဆူညံစွာခံစားခဲ့ရသေးသည်။ ပိုဆိုးသည်က သူတို့ဒေသတွင်Drama, Fancy စိတ်မဝင်စား၊ Action ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆိုလျှင် လာထားပဲဆိုသဖြင့် ခုတ်သံ၊ ထစ်သံ၊ Fighting သံတဖြောင်းဖြောင်းကိုသာ ဗြောက်အိုးသံများနှင့် အပြိုင်ကြားခဲ့ရသည်။
မူလတန်းကျောင်းတွင် စားသောက်ပြီးသည်နှင့်ပွဲဈေးအတွင်းသွားရိုက်မည်ဆိုသဖြင့် ပြင်ရဆင်ရသေးသည်။ မင်းသမီးလုပ်ရတာအချို့က လွယ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ နေပူခြစ်ခြစ်တောက်တောက်အောက်တွင် မင်းသား နှင့် ဈေးလျှောက်ဝယ်ဟန်သရုပ်ဆောင်ပြရသည်။ ရွာရှိလူများက ရုပ်ရှင်ရိုက်တာမမြင်ဖူးသဖြင့် အုံးအုံးကျွတ် ကျွတ် လာကြည့်ကြသည်။ နှစ်ယောက်သားဈေးထဲလျှောက်သွားလိုက်၊ ဆွဲကြိုးတွေ၊ အဝတ်အစားတွေ ကိုယ်မှာ ကပ်ကြည့်လိုက်နှင့် Silent Acting မျိုးစုံလုပ်ပြရသည်။ တချို့ဆိုလျှင် တခစ်ခစ်နှင့်ထရယ်သည့် သူကထရယ်သည်။ ကင်မရာ သြကညိ ထဲမှ ဖြတ်ပြေးသူက ဖြတ်ပြေးသည်။ ဒီကြားထဲအိုက်တင်လုပ်နေသည် ကို မသိနားမလည်၍ အော်တိုလာရေးခိုင်းသည်ကလည်းရှိသေးသည် အရာအားလုံးမှာ ဒေသခံရွာသားများ အတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်နေပေသည်။ အိုက်တင်လုပ်လျှင် လူဘယ်လောက်များများမရှက်တတ်သော ကျွန်မ ပင်ရယ်သံများကြောင့် ရှက်ချင်လာသလိုလိုနှင့်အယောင်ယောင်အမှားမှားတွေဖြစ်ကုန်တော့သည်။
ဘယ်လိုမှ ရိုက်မရတဲ့အဆုံးလေးဖက်လေးရံကာထားသော ပန်းချီပြခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ အဖွဲ့သားများကိုယ်ရောင်ဖျောက် နေလိုက်တော့မှ လူအနည်းငယ်ရှဲသွားသည်။ ပဒေါင်အမျိုးသမီးကြီးများကိုလည်း လည်ပင်းတွင် ပုဝါများ ပတ်ကာလျှောက်သွားနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များကြည့်ချင်သည်ဆိုမှ အခကြေး ငွေဖြင့်ပုဝါလှပ်ပြကာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံသည်ဟုသိရသည်။ ပန်းချီပြခန်းပိုင်ရှင်လင်မယားမှာ ရေဦးဇာတိဟုသိရပြီး ပန်းချီဆရာမှာရေဆေး၊ ဆီဆေးပန်းချီများကို လက်ရာသေသပ်စွာဆွဲထားပြီး၊ ဆရာမမှာကင်းဘတ်အောက်ခံ ထားပြီးအပေါ်မှ ကြိုးများနှင့်လိုသလိုပုံဖော်ပြီးပန်းပွင့်များ၊ တောင်တန်းများကိုအပေါ်မှ စုတ်ဖြင့်ခြယ်ကာ အရောင် ပြန်ဆက်သည်မှာထူးခြားဆန်းကြယ်လှသော ပန်းချီအနုပညာပင်ဖြစ်ပေသည်။
အင်းတိန်ရွာမှ ထွက်ခွာဖို့အဖွဲ့သားများ စက်လှေရှိရာသို့ရောက်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်မတို့၏စက်လှေသမား မှာဘုရားပွဲအတွင်းလျှောက်လည်နေ၍ တော်တော်နှင့်ပြန်ထွက်မလာသေးသဖြင့် ကိုယ်တော်ချောကိုလိုက်ရှာကြ ရသေးသည်။ စက်လှေနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လာကြတော့ ရေဆင်းကူးသူများလည်း ဝုန်းဒိုင်းကျဲကူးကြပြီး၊ ဗြောက်အိုးဖောက်သံများကိုလည်း နှုတ်ဆက်တေးသံသာအဖြစ် ထပ်မံကြားလိုက်ရသေးသည်။ သူ့အရပ်နှင့် သူ့ဇာတ်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲ၊ ဒါတောင်အဘတင်သန်းဦးကို ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကရိုးရာမို့လို့၊ ပျော်ကြလို့ ဗြောက်အိုးဖောက်တာပါ။ မဖမ်းရဘူးနော်ဟုဆိုလေသဖြင့် ရယ်မောဖြစ်ကြသေးသည်။
ထို့နောက်ဖောင်တော်ဦးဘုရားရှိရာ၊ သားလေးရွာနှင့်မလှမ်းမကမ်းရှိ ရွှေအင်းသားHotelသို့ရိုက်ကူးရေး အတွက် ရောက်လာခဲ့ကြပြန်သည်။ အနုပညာမြန်မာ့လက်ရာများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ရွှေအင်းသား မှာလေကောင်းလေသန့်ရကာ အနားယူချင်စရာကောင်းလှပေသည်။ ပိုင်ရှင်အန်တီကြီးမှာလည်း ဖော်ရွှေပျူငှာစွာဖြင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်လှပေသည်။ Hotel၏အဓိကအလှကို ဝါးလုံးများသက်ကယ်များဖြင့် အလှဖော်ထားသည်မှာ မြန်မာဆန်ကာ ခေတ်မီလှလွန်းသည်။Hotel မှကျွေးမွေးသော ခေါက်ဆွဲကြော်ကို တက်သုတ်ရိုက်စားရန် အဘကဆော်ဩနေလေသည်။ ညနေရောက်လာသဖြင့် မနေ့ကလို လမ်းပျောက်မည်ကို လွန်စွာစိုးရိမ်နေကြ သည်။ သို့သော်ထိုနေ့က အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ကာ တည်းခိုရာ၊ ညောင်ရွှေသို့ပြန်ရောက်လာကြသော် လည်းအင်းလေးအမှတ်တရ မျက်စိနာကူးလာပေတော့သည်။
ယနေ့မှာတော့Queen Inn မှာပင် မနက် Shooting တည်မည်ဆိုသောကြောင့် မနက် (၈းဝ၀)ကတည်းက Breakfast စားပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ထားလိုက်သည်။ ကိုညီသစ်ထူး၏ Second Series ထဲမှ သီချင်းတစ်ပုဒ် အတွက် အမေခန်းမှသရုပ်ဆောင်မည့် Actor လိုသဖြင့် ဗိုလ်ကြီးခေါင်းစားသွားရသည်။ ပါလာသောအမေများ ကလည်း Cameraနောက်ကွယ်မှလိုတာလုပ်ပေးမည်။ ရှေ့သို့မတက်ရဲဆိုသောအမေများဖြစ်နေသဖြင့် အခက် တွေ့ရလေသည်။ ဖျတ်ခနဲသတိရပြီး ချွန်ပေးလိုက်သူက ကျွန်မ။ Inn ပိုင်ရှင်အန်တီစုကို အကူအညီတောင်းကာ ပူဆာတော့ အန်တီစုကလက်ခံရှာသည်။ အများကြီးတော့မခိုင်းပါနဲ့၊ မလုပ်တတ်လို့ပါဟု မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ဆိုသဖြင့် ဖုန်းပြောတဲ့တစ်ကဒ်တည်းပါဟုချော့ရလေသည်။
ဟုတ်ပြီ ရိုက်တော့မယ် Dialogue မလိုဘူးမှားချင် မှားပစေ Acting ပဲယူမှာReady ၅-၄-၃-၂-၁ Action! အန်တီစုဖုန်းလား၍ဖုန်းခွက်ကိုကိုင်လိုက်စဉ် တစ်ဖက်မှ မင်းသားက အဖွားကြီးအသံမှန်းသိသွား၍ဘာမှမပြောရဲဘဲ ဖုန်းချသွားသဖြင့် အန်တီစုမှHello! ဟုထူး၍စိတ်တိုတိုနှင့်ဖုန်းချပစ်လိုက်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်Hello!ထူးသံအထိတော့မှန်သည်။ ဖုန်းချ ပစ်လိုက်ရင်း “အဟီး၊ ဟုတ်လား” ဟုရယ်နေသည်။ တစ်ကယ်ဆိုမျက်နှာထားတင်းတင်းနှင့် စိတ်ဆိုးရမှာကို သူ့ခမျာ ကျွန်မတို့နှိပ်စက်၍ မလုပ်တတ်၊ မကိုင်တတ်သည့်ကြားမှ ကြိုးစား၍ သရုပ်ဆောင်ပေးသွားရှာသဖြင့် အခက်အခဲများကြားမှ အဆင်ပြေသွားပါတော့သည်။
လိုချင်တဲ့ကဒ်များရပြီမို့၊ အင်လေးကန်ထဲသို့အားလုံးချီတက်ကြသည်။ စက်လှေတစ်စီးက Camera Man နှင့်အဘအပါအဝင် မြဝတီအဖွဲ့သားများ၊ နောက်တစ်စီးက သရုပ်ဆောင်မိသားစုများနှင့်ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့် အသီးသီး ကိုယ့်စက်လှေပေါ်သို့ ကိုယ်အတက်၊ ရုတ်တရက်အဘ၏အသံစူးစူးကိုကြားလိုက်ရသည်။ Digital CAMERAအပါအဝင်သူ့ပစ္စည်းများကို သွားလေရာ ခါးပတ်အိတ်ပတ်၍ လွယ်ထားတတ်သူက Camera ပျောက်သွားပြီတဲ့၊ အဖွဲ့သားများအားလုံးလည်းစက်လှေပေါ်ရောက်သူကရောက်နှင့်နေပြီ။ Inn ပိုင်ရှင်အန်တီစုနှင့် သားဖြစ်သူတို့ကလည်း လမ်းပြအဖြစ်လိုက်ခဲမည်ဆိုသည့်အချိန်တွင်မှ Camera ပျောက်သည့်တွက် ဒေါင်းတောက် အောင်ရှာကြဖွေကြပါသည်။ Camera ထက်မှတ်တမ်းပုံများက ပိုအရေးကြီးသည်ဟုဆိုကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာ သည်။
ကျွန်မတို့ရိုက်ကူးစဉ်တစ်လျှောက်မှတ်တမ်းများက ဤကင်မရာအတွင်းမှာပင်ရှိနေသည်။ ခရီးထွက်ရာ တွင် ကင်မရာမရှိခြင်းက စိတ်ကြိုက်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်မရသဖြင့် ခေါင်းမပါသော ကိုယ်ထည်ကြီးနှင့်တူပေသည်။ ဘယ်လိုမှ ရှာမရတဲ့အဆုံးလက်လျော့ကာခရီးဆက်ကြရတော့သည်။
အန်တီစုလမ်းပြ၍ Floating Market အနောက်ဘက်၊ ဟဲယာရွာမရှိ “စိန်သမာဓိ” ငွေထည်ပန်းတိမ် လုပ်ငန်း”သို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ မိသားစုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လှပသောငွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်မွမ်းမံထားသော အသုံး အဆောင်အိုးခွက်များ၊ လက်ဝတ်ရတနားများ၊ ငွေဓားများမှာ မြန်မာ့လက်မှုပညာအနုစိတ်လှပေသည်။ ထူးခြားသည်က ရှားပါးပုရပိုက်များ၊ ကနုတ်လက်ရာဟောင်းများပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများ အထူးနှစ်ခြိုက်ကြ သည့်နေရာလည်းဖြစ်ပေသည်။ ဘုရားခန်းမှာလည်း ကျက်သရေရှိစွာတင့်တယ်လှပေသည်။
မြင်မြင်သမျှအသုံး အဆောင်များက ငွေထည်ပစ္စည်းများသာဖြစ်နေသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဟဲယာရွာထဲရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း သို့ရောက်လာခဲ့ကြပြန်သည်။ ထိုဘုန်းကြီးကျောင်း၏အကျယ်ကို မခန့်မှန်းတတ်သော်လည်း လူတစ်ယောက် လုံးပတ်စာမျှ စိုက်ထူထားသော ကျောင်းတိုင်လုံးများမှာ (၁၀ဝ)ကျော်သည်ဟုဆိုသဖြင့် “အားပါးပါး”ဟု ပြိုင်တူအသံထွက်ခဲ့ကြရသည်။ နေ့လည်စာကိုလည်း ထိုကျောင်းတိုက်ကြီးမှာပင် အားရပါးရစားပစ်ခဲ့သည်။
နေ့လည်(၁းဝ၀)နာရီလောက်မှာတော့ နမ့်ပန်ရွာရှိအလိုတော်ပေါက်ဘုရားသို့အရောကတွင်တော့ အဘလက်ထဲတွင် မနက်ကပျောက်သွားသည်ဆိုသော Digital Camera ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်က ပျောက် သွားတာမဟုတ်၊ သရုပ်ဆောင်လုပ်ရန်ပါလာသော ကောင်မလေးမှ ဖွက်ထားကာ၊ ကျီစယ်လိုက်ခြင်းဟုဆိုသဖြင့် အံ့ဩသွားခဲ့ရသည်။
သူမ၏ကျီစယ်မှုကဘယ်အတိုင်းအတာ၊ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာလဲဆိုတာ မစဉ်းစား၊ လုပ်သင့်သည် မလုပ်သင့်သည်မတွေးတတ်၊ မိမိပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုအတွက်ကြောင့် လူကြီးဖြစ်သော အဘမှာ စိတ်ညစ်ခဲ့ရသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ အဘက Battery အပိုများကို စိတ်ရှုပ်သည်ဆိုကာ အခန်းထဲမှာပင်ထားပစ်ခဲ့သဖြင့် Camera လက်ထဲပြန်ရောက်လာချိန်တွင် အားမရှိတော့၊ Charging လည်းသွင်းလို့မရသဖြင့် ဘာပုံမှလည်းနောက်ထပ် ရိုက်မရတော့ပါ။ ကိုယ်ပိုင် Camera မပါသည့် ဤခရီးစဉ်အတွက် ကျွန်မကိုယ်သာကျွန်မအပြစ်တင်နေမိသည်။
အလိုတော်ပေါက်ဘုရားကြီးကိုတည်ထားခဲ့သူမှာ သီရိဓမ္မာသောကမင်းဟု မှတ်တမ်းများအရ လေ့လာခဲ့ ရသည်။ ထင်ရှားသောဘုရားနှစ်ဆူဖြစ်သည့် အရှေကဘက်လိုဏ်တွင် စံပယ်တော်မူသည့်ဘုရားနှင့် တောင်ဘက် လိုဏ်တွင် စံပယ်တော်မူသည့်ဘုရားတို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားပေါ်တွင် ဈေးရောင်းရင်းနှင့် ဆေးပေါ့လိပ်ထိုင်လိပ်နေ သူများကိုတွေ့ရသဖြင့် စပ်စပ်စုစုနေတတ်သော ကျွန်မ ဆေးလိပ်ဝင်လိပ်လိုက်သေးသည်။ အဖွဲ့သားများအား လုံး အလိုတော်ပေါက်ဘုရားကြီးကို လှည့်ပတ်ဖူးပြီးသကာလ ရုပ်တုတော်မြတ်များအား ဆက်လက်ပင့်ဆောင် ပူဇော်ရန်စီစဉ်ထားသော ဖောင်တော်အကြီးဆိုက်ကပ်ထားရာ “သဒ္ဓမ္ပဝုဒ္ဓိရီ” စာသင်တိုက်၊ ရွှေဘုံသာကျောင်းသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်။
ကျွန်မတို့အဖွဲ့သားများအားလုံးလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ အပေါ် တက်လိုက်၊ အောက်ဆင်းလိုက်၊ ဘုန်းတော်ကြီးချကျွေးသော မုန့်မျိုးစုံကို စားလိုက်နှင့်အတော်လေး ဟုတ်နေ ကြသည်။
တစ်ခရီးထဲအတူသွားကြသောအခါ အားလုံးမှာ သွေးချင်းမိသားစုများပမာ စလိုက်၊ နောက်လိုက်ကြ၊ တစ်ဦးလိုတဲ့အကူအညီတစ်ဦးက ပေးလိုက်နှင့်ဖေးဖေးမမရှိကြပေသည်။ ခဏကြာတော့ထုံးစံအတိုင်း ဗြောက်အိုးသံ တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ခြေနှင့်လှော်သော လှေတန်းကြီးပေါ်တွင် ကခုန်၍လိုက်ပါလာသော အင်းသားများကို ပျော်ရွှင်စွာတွေ့ရလေသည်။
ရွှေဘုံသာကျောင်းရှေ့တွင်ဆိုက်ကပ်ထားသော ဖော်တော်အကြီးပေါ်သို့ ဖော်တော်ငယ် ပေါ်မှ ရုပ်ထုတော်မြတ်လေးဆူ ကို ပြောင်းလဲပင့်ဆောင်ကာ နှစ်ညတာကျိန်းစက်မည့် ဟဲယာရွာမကျောင်းသို့ ဆက်လက်ပင့်ဆော်တော်မူကြပါသည်။ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသော လှေငယ်များနှင့်စက်လှေများမှာ အင်းလေးကန် အတွင်း၌အစီအရီပြည့်သိပ်နေကြသည်။ နိုင်ငံခြားသားများကတော့ Camera မလွတ်တမ်းနှိပ်ကာ၊ မပြတ်မှတ်တမ်း တင်နေကြသည်။
မူလအစီအစဉ်က ဖော်တော်အကြီးပေါ်သို့ ရိုက်ကူးရေးအဖြစ်လိုက်ပါသွားကြမည့် အဘနှင့်ဗိုလ်ကြီးတို့အဖွဲ့ အား ကျန်အဖွဲ့သားများက စက်လှေနှစ်စီးဖြင့် နောက်ကလိုက်ကာ လမ်းတစ်ဝက်မှာပင်ပြန်ခေါ်လာကြမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်များပြားလှသော ဘုရားဖူးပရိသတ်များ၏ လှေများကြောင့်ထင်သလို ရှေ့ဆက် တိုးမရဘဲ၊ ကျွန်မတို့လှေမှာ အနောက်ဘက်တွင်ကွာဝေးကာကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။ သည်ကြားထဲပိုဆိုးသည်က အဘတို့ကိုပြန်တင်ခေါ်ရမည့်စက်လှေတစ်စီးမှာပါမလာခဲ့ပေ။ သူလည်း လှေကြားထဲပိတ်မိကာဆက်လိုက်လာလို့ မရတော့သဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ရပေသည်။
ကျွန်မတို့ကျန်ရှိနေသောအဖွဲ့သားများမှာ အဘတို့လိုက်ပါသွားသော ဖောင်တော်အကြီးနှင့် အလှမ်းကွာဝေး နေသဖြင့်စိတ်ပူနေရသည့်အထဲ တစ်ခြားလှေများနှင့်လှေချင်းကပ်မိသည်နှင့်လှမ်း၍မိတ်ဆင်ကြ၊ အော်ဟစ်ကာ လက်လှမ်းဆွဲကြသည်များကြောင့် အတော်လေးစိတ်ပင်ပန်းကြရသည်။ သို့သော် အားလုံးက အနုပညာအလုပ်လုပ် နေသူများဖြစ်၍ တစ်ချက်ကလေးမှ မျက်နှာမပျက်ရဲဘဲ ဟန်ဆောင်၍ရယ်ပြရ၊ စကားပြန်ပြောရနှင့် ရေပေါ် တွင် အုတ်အော်သောင်းနင်းပွက်လောညံနေသေးသည်။ ခပ်သွက်သွက်ကောင်မလေးများဆိုလျှင်လှေချင်းနီးလာသည်နှင့် ကိုညီသစ်ထူး၏လက်ကိုအမိအရစွဲကာနှုတ်ဆက်ကြသည်မှာအသည်းတယားယားနှင့်ပင်။
အကြောင်းမှာကိုယ်တော်ချောကလှေဦးထိပ်တွင်တစ်ကိုယ်တော်ထိုင်ကာ လေသလပ်ခံနေခြင်းကြောင့်ပင်။ ဟိုဖက်လှေကလက်လှမ်းပေးလိုက်၊ သူကလှမ်းဆွဲလိုက်နှင့်။ သူ့အမေခမျာတဟဲ့ဟဲ့နှင့်အော်နေရှာသည်။ ဘယ်တော့ ပလုံဟူသောရေထဲကျသံကြားရမလဲဟု နားစွင့်နေရသည်။ ပရိတ်သတ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ရတာလည်း ဒီတစ်ချီ တော့မလွယ်ကြောပဲဟု မုဒိတာဖြင့်တွေးလိုက်မိသည်။ ဟိုလှေကျော်တက်၊ ဒီလှေလမ်းတောင်းနှင့် နောက်ဆုံး ဖောင်တော်ကြီးနားသို့အရောက်တွင် အဘနှင့်ကင်မရာမင်း ဦးမိုးကြီး၊ ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်မြင့်တို့ကို စက်လှေပေါ်သို့ ဆင်းလာရန် အချက်ပြကြနှင့်ပျော်စရာတော့ကောင်းလှပေသည်။
အဘတို့အဖွဲ့ဟဲယာရွာမကျောင်းသို့ တောက်လျှောက်လိုက်သွားပါက အပြန်မိုးချုပ်ပေတော့မည်။ မိုးချုပ်လျှင် ယခင်နေ့ကအတိုင်း လမ်းပျောက်ပေဦးမည်။ ကုန်းပေါ်မှာလမ်းပျောက်သည့်က အကြောင်းမဟုတ်၊ရေပြင်ကျယ်ကြီးပေါ်မှာနောက်ထပ်လမ်းပျောက်မည့်အဖြစ်ကို ထပ်အဖြစ်မခံလိုကြ။
အားလုံးကလည်းညနေ(၄း၃၀)နာရီနေပြီမို့ နောက်ကြောင်းလှည့်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီချက် ရ၍ ညောင်ရွှေသို့ လှေဦးပြန်လှည့်လာခဲ့ကြတော့သည်။ အပြန်ခရီးက ရှောရှောရှုရှုနှင့် အားလုံးအဆင်ပြေနေကြ၍ သီချင်းတညည်းညည်းနှင့်စည်းချက်လိုက်နေသူရှိသလို ဗခအငညါ မျိုးစုံလုပ်၍ ဖျော်ဖြေသူကလည်းရှိနေသေး သည်။
မနက်ဖြန်ပြန်ကြရမည့် ကျွန်မနှင့်ကိုညီသစ်ထူးတို့ မိသားစုနှစ်ဖွဲ့အတွက် မီးပုံပွဲလည်း လုပ်ရင်း၊ Night Scene တည်ဦးမည်ဟုဆိုသဖြင့် ထမင်းစးရေချိုးပြီးကမန်းကတန်း Make up ကစပြန်လိမ်း၇သေးသည်း နားချိန်တစ်ချက်ကလေးမှ မယူဘဲပြင်ဆင်လို့အပြီးမှာတော့ ညဖက်တစ်ရက်မှမရွာလေသော မိုးကကောက်ခါ ငင်ကာရွာချပါတော့သည်။ အားလုံးကလည်း ပင်ပန်းနေကြသည့်ကြားမှ မီးပုံပွဲကို အားခဲထားကြသဖြင့် “ဟာ” “ဟင်” ဟုသာ အာမေဋိတ်သံမျိုးစုံညံနေကြလေသည်။ အချိန်ကလည်း ည(၈းဝ၀)နာရီထိုးခါနီးပဲရှိသေးသဖြင့် အဘက မိုးတိတ်အောင်စောင့်ပြီးရိုက်မည်။
ဒီတစ်ညပဲရိုက်လို့ရတော့မှာဟုဆိုကာ Make up မလိမ်းဘဲ၊ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားထားဖို့ ချော့ပြောင်နေသဖြင့် ကျွန်မမှာ ရယ်ချင်သွားမိသည်။ ဘာမှမဟုတ်သေးသော ကျွန်မကို နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးများလိုအလေးထားပြောနေသောကြောင့်ပင်အခန်းထဲတွင် သိမ်းစရာရှိသည်များကိုသိမ်းရင်း၊မိုးအတိတ်ကိုခဏနားရင်းစောင့်နေလိုက်သည်။ ည(၁၀းဝ၀)နာရီလောက်မှာတော့ မိုးလုံးဝတိတ်သွား ပြီမို့ရိုက်ကူးရေးစတင်ပါတော့သည်။ သမံတလင်းများ စိုစွတ်သွားသောကြောင့် မီးပုံပွဲမလုပ်ဖြစ်ဘဲ ရိုက်ကူးရေး သာဖန်တီးခဲ့ရသည်။ ညကြီးမိုးချုပ်ဆူဆူညံညံ ရိုက်ကူးနေသော အသံများကြောင့် Inn ထဲရှိ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များအခန်းကိုယ်စီမှ အလျှိုလျှိုထွက်လာကြလေတော့သည်။
ကျွန်မလိမ်းထားသောသနပ်ခါးကိုအထူးအဆန်းစိတ်ဝင်စားနေသော ဩစတြေးလျမလေးတစ်ယောက်ကို Nice to meet you ဟုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့သူမက “မင်္ဂလာပါ” ဟုပီပီသသပြန်ပြောနေသဖြင့် ပြုံးလိုက်မိသေး သည်။ သိချင်သည်များကို မေးကြ၊ မြန်းကြနှင့်တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက်ရှင်းပြရင်း ခင်မင်သွားသေး သည်။ ကျွန်မက “ရှက်လိုက်တာ၊ နင်မြန်မာလိုတတ်တာငါမသိလို့ပါ”ဟုပြောတော့ သူမက “အရမ်းအထင်မကြီး ပါနဲ့၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့မင်္ဂလာပါနှစ်လုံးတည်းတတ်တာပါ” လို့ ရိုးရိုးသားသားဖွင့်ပြောလေသည်။ အဲဒီ အခါကျမှ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်၏အဖြစ်ကို ကြည့်နေသော အန်တီစုတို့မိသားစုများက တစ်ဟားဟားနှင့်ပွဲကျသွားလေသည်။
သို့သော်အကင်းပါးလှသောသူမက တစ်ပါးသူ၏ မျက်နှာရိပ်၊ မျက်နှာကဲကို ကြည့်၍ သူ့ အကြောင်းပြောနေသည်ကို ရိပ်မိသောအခါ အတင်းမေးပါတော့သည်။ ပြောတတ်သလောက်ပြန်ပြောရင်း သူမက ဗမာစာသင်ပေးပါဟုတောင်းဆိုသဖြင့် အခက်တွေ့သွားသည်။ သိသလောက်သင်ပေးပြန်တော့သူမက အထင်တွေစွပ်ကြီးကာ သူမမန္တလေးရောက်ခဲ့စဉ်က မှတ်တမ်းတင်ထားသော Camera ထဲရှိ ရုပ်သေးအကများ အကြောင်းထပ်ရှင်းပြခိုင်းသဖြင့် အပြေးအလွှာ ဥာဏ်ကူ၍ စဉ်းစားခဲ့သော်လည်း "It beyond me."တစ်ခွန်းတည်းသာထွက်ကျလာခဲ့ရ၏။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးစီနှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင် ဘာသာစကားက အဓိကကျလွန်းလှပေသည်။ Knowledge Age တွင် International language အဖြစ် English စာတော့ပြောတတ်၊ ဆိုတတ်မှလူရာဝင်ပေမည်။ ယခုလို နိုင်ငံခြားသားများနှင့် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ကြုံလာသောအခါ ပြင်ပဗဟုသုတများကို ကောင်းစွာမလေ့လာထားသော ကျွန်မအရှက်ကွဲရလေပြီ။
တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်၏ အမှတ်တရများစွာ ထင်ကျန်စေရစ်ခဲ့သော ဤခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးနေ့၊ နံနက်မိုးလင်း ချိန်တွင် ပစ္စည်းအားလုံးသိမ်းဆည်းပြီး ရန်ကုန်ပြန်ဖို့အဆင်သင့်လုပ်ရပါတော့၏ အေးသာယာကားဂိတ်မှ တောင်ပေါ် သားကားကို ထွက်မည့်အချိန် နံနက် (၁၀းဝ၀)နာရီလက်မှတ်ဖြတ်ထားသော်လည်း လက်ရှိကျွန်မတို့က ညောင်ရွှေ မှာရောက်နေသဖြင့် ညောင်ရွှေလမ်းခွဲမှ စောင့်စီးပါက နေ့လည် (၁၂းဝ၀)နာရီဝန်းကျင်မှအရောက်သွားလျှင် မှီသည်ဆိုသဖြင့် နေ့လည်စာစာရင်း၊ အဘနှင့် စကားပြောရင်း အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်သည်။Queen Innမှတစ်နာရီစောထွက်ပြီး ညောင်ရွှေလမ်းဆုံမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်သို့အပြန်ခရီးလမ်းသည် မှတ်သားစရာ၊ သင်ခန်းစာ ယူစရာများနှင့်ပြည့်သိပ်နေပြီးဖော်တော်ဦးဘုရားကြီးအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့သည့်ပီတိသည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှမလဲနိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိလှပေတော့သည်။
အနုပညာအလုပ်က တကယ်ကို မလွယ်တာဘဲနော်
ရုပ်ရှင်တွေ တီဗီတွေမှာ ကြည့်ရတော့တာ ခနလေးရယ်
တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့ခါ ဘယ်လောက် ဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတာ မကြုံဖူးရင်သိဖို့မလွယ်ဘူး
အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးနဲ့ နိုင်ငံကျော်တဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါစေ ညီမရေ။
မမဆုရေးတာကို ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ တကူးတကလာဖတ်တာနော်
မမတို.က ချိုမြိန်တဲ့ဒုက္ခလေးတွေနဲ. တွေ.ဆုံခဲ့ရတာကိုး...